Fest St. Martin - omenala ma ka na-aga n'ihu
St Martin - omenala na oge a
Ịga St. Martin
Omenala ndị ọzọ metụtara St. Martin
11. O doro anya na a na-echeta November maka na ọ bụ ụbọchị Martine. Nke ahụ bụ n'afọ 397 ma ebe ọ bụ na ememe ụbọchị ahụ na Central Europe ma mee ọdịiche dị iche na mpaghara ahụ.
Ebube St Martin na-egbuke egbuke
Ọ bụrụ na ị gbakọọ, ụbọchị a nwekwara ihe gbasara 40 ụbọchị tupu Christmas ma si otú a malite mmalite, dị ka a na-eme site na emepechabeghị, karịsịa na Chọọchị Ọtọdọks.
Dịka mmalite nke Lent na Shrove Tuesday, ụbọchị St. Martin nyere ndị mmadụ ohere iri nri na nro, tupu ụbọchị 40 sochirinụ bụ obere nri ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla.
Na Rhineland bụ 11. November nakwa mmalite nke oge ndụ. Tụkwasị na nke ahụ, a kwụrụ ụtụ isi n'ụbọchị ahụ, mgbe mgbe n'ụdị na geese. A ga-enye anụmanụ ahụ nri n'oge oyi, n'ihi ya, a na-emepụta ngwaahịa ahụ n'ụzọ dị otú a ma n'otu ụgwọ a kwụrụ.
11. Ma, ụbọchị November bụ ụbọchị nke ọrụ mmekọrịta ahụ gwụrụ ma ọ bụ malitegharịa, bụ nke ntinye ụgwọ ma ọ bụ mmasị dị na njedebe wee malite ọzọ. Ụbọchị Martini bụ oge maka mmalite na njedebe na gburugburu akụ na ụba ma bụrụ nke a na-akpọ ụbọchị mmasị.
A pụrụ ịkọwa ọdịnala nke iri nri goose Martin n'ụzọ dị otú a, ma ọ bụkwa akụkọ na-akọ banyere njikọ ya na Martinsgans. A ga - edozi Martin ka ọ bụrụ bishọp, nke ọ na - achọghị ma zoo. Geese ekwuola na ọ na-ezo ebe ọ na-ezo ya ma si otú a mee ka o kwe omume na a ka nwere ike ido ya nsọ. Ma enwerekwa akụkọ ndi ozo banyere nri ohia nke omenala, na Germany, a na-eji goo na-eje ozi n'ime otutu mpaghara na dumplings na uhie uhie.
Abụọ Martin Martin na ederede na ederede na ụdị enyi enyi na-eji egwu egwu maka agba
A na-eme njem ndị a n'obodo nta ndị ọzọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara dị n'ógbè ahụ nwere ike ịme onwe ya, nke na-eme n'oge dị iche karịa ọpụpụ nke ụmụ akwụkwọ si ụlọ akwụkwọ ahụ. Ya mere, o nwere ike ime na na ụfọdụ parish ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ a pụrụ ịhụ parade St. Martin. Ọ bụrụ na ndị na-eme egwuregwu ezughị ezu maka St Martin, ma a na-agbahapụ ya ma ụgbọ okporo ígwè na-eme naanị otu ugboro.
N'ime usoro a, ndị mmadụ na-esonyere na St. Martin. Nke a na-adabere na mpaghara ahụ ejiji nke onye agha Rom. Ndị na-agụ egwú na-abụ abụ Martinslieder na ndị agbụrụ. Na njedebe nke usoro ahụ, ọkụ St. Martin, kwadebere n'okpuru nlekọta siri ike, na-echere ọkụ, nke a na-enwu mgbe ndị ọkwọ ụgbọ ala rutere.
Sankt Martin - Abụ na-abụrụ na St. Martin-Ffeuer
Onye na-eme ihe nkiri St Martin ga-agwakwa ndị na-eso ụgbọ okporo ígwè okwu ole na ole, ma eleghị anya icheta akụkọ banyere onye arịrịọ na nkewa uwe. N'ọtụtụ ebe, a na-emegharị ọnọdụ a.
N'ikpeazụ, ụmụaka ndị na-esonyere ụgbọ okporo ígwè na ọkụ ha na-enweta otu Weckmann, Stutenkerl ma ọ bụ Martin geese mee ka ọ bụrụ achịcha na-eko achịcha, dị iche iche dabere na mpaghara ahụ.
Nnukwu ihe na-aga St Martin na-eme na Worms-Hochheim, na Kempen na Lower Rhine na Bocholt. Ụgbọ oloko ndị a na-agụnye ndị 6.000 ngwa ngwa. Maka ụmụaka, ememe nke St. Martin bụ otu n'ime ememme kacha mkpa n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Ha na-ele ya anya na mbido ma na-achọsi ike imepụta ọkụ. N'ezie, nwatakịrị na-enweta nkwado nke nne na nna ha, ma ọ dịghị mkpa ka ha zuo okè. O doro anya na e nwere abụ mgbe ị na-arụ ọrụ, e nwere ụlọ na-ekpo ọkụ na biscuits na n'oge nkuzi ịkụzi ihe nwere ike ịṅụ mmiri ozuzo ma ọ bụ oké mmiri ozuzo n'èzí, ọ dị mma n'ime.
N'ezie, ụmụ akwụkwọ meworo agadi na-eme oriọna n'oge klas na ụlọ akwụkwọ. Na mbụ, ọ bụ omenala iji kpoo ihu na-ekpo ọkụ shuga na-eche ihu ma jirizie tonip a dị ka oriọna.
Na mgbakwunye na ịkekọrịta uwe ahụ ma rie Martinsgans dị gburugburu St. Martin nakwa omenala ndị ọzọ. Na Martinssingen ọ bụghị naanị na-aga ebe ọ bụla ị na-agagharị, ma na-esote ma ọ bụ n'ụbọchị pụrụ iche.
N'ọtụtụ ógbè, ụmụaka na-agagharị site n'ụlọ ruo n'ụlọ na ntanụ ha mgbe ha na-agagharị n'egwú ahụ, na-abụ abụ martini nye ndị na-abanye n'ọnụ ụzọ ma na-arịọ maka obere onyinye. Ndị a bụ ezigbo sweets, mkpụrụ osisi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị egwu.
N'okpuru aha Martinisingen bụ omenala ochie ka a nọgidere na-enwe n'ebe ndị Protestant nọ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Frisia. Otú ọ dị, ọ na-ezo aka Martin Luther, onye aha ya kwa ụbọchị na 11. A na-eme ememe ọnwa Novemba. N'ebe ndịda Germany na obodo Protestant bụ belsnickel Na-atụ anya inye onyinye na ụbọchị St. Martin na mgbe ụfọdụ Nussmärtel ie.
Ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ụmụaka na ememe ndị ọzọ